Linkedin မှကျွန်ုပ်တို့၏နောက်လိုက် Antony Raj Jayamani | အလုပ်များ - အလုပ်ရှာဖွေရေးခရီးသွားခြင်း Love Dubai!
အန်တိုနီ Raj LinkedIn ကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်လိုက် Jayamani ။ သူကသူ့နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ဦးအမြန်အီးမေးလ်ပို့ဖို့စီမံထားပါတယ် ဒူဘိုင်းကနေဓာတ်ပုံ updated.
ဤတွင်ငါလာ ဒူဘိုင်းမှ, ငါ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင် မတ်လ 5th 2018 ပေါ်မှာ။ ငါဒူဘိုင်းမှလာမယ့်နေစဉ် "ငါသုညကြီးနှင့်ကမ္ဘာအကြောင်းကိုတစ်ခုတည်းထိတွေ့မှုမရှိကြပါဘူး။ တစ်နှစ်ပြီးနောက်ဒူဘိုင်းငါ့ကိုလူတစေသည်ငါ့ကိုယုံကြည်မှုပြီးတော့ပိုပြီးအသိပညာရရှိခဲ့ပိုပြီးအားပေးတော်မူ၏။ ဒူဘိုင်းငါ၏အအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်အသက်တာ၏မှောင်မိုက်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်ငါ့ကိုအလင်းပြသ။ အခုတော့ငါဒူဘိုင်းနေချစ်နေတဲ့စက္ကန့်အိမ်မှာကဲ့သို့ဖြစ်ပါတယ်။ ငါဒူဘိုင်းတိုးတက်မှုနှုန်းအားလုံးကိုအကောင်းဆုံးအောင်မြင်မှုအဘို့အလိုရှိ၏။ ငါသည်ငါ၏ဆုံးမသွန်သင်ဖော်ထုတ်ဤပလက်ဖောင်းဘို့အများကြီးကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။
အဘယ်သူမျှမစကားလုံးများကိုဒူဘိုင်းနှင့်၎င်း၏ခေါင်းဆောင်ကိုဖော်ပြရန်နိုင်ပါတယ်။ အိန္ဒိယကနေအတော်များများကျွမ်းကျင်သူများဒူဘိုင်းသွားရောက်ခဲ့ကြသည် အနည်းဆုံး2ကြိမ်နှင့်သူတို့တိုက်ရိုက်သွားနှင့်အဲဒီမှာအလုပ်လုပ်နိုင်အလိုရှိ၏။ အရာအားလုံးပဲဒါကြောင့်စုံလင်သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်ကောင်းကင်နဲ့တူရဲ့.
ဤမျှလောက်များစွာသောပျော်ရွှင်လူတွေ။ ငါတို့ရှိသမျှသည်နေအိမ်နိုင်ငံများတွင်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုတူလိမ့်မယ်လို့အလိုရှိ၏။ ထိုမှတပါး, ဒူဘိုင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ်စီမံခန့်ခွဲ သူတို့နိုင်ငံသားများနှင့်အတူဖြစ်သင့်မည်သို့၏ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်အောက်ပါ။ ဒူဘိုင်းကအားလုံးကိုကမ္ဘာ့ဖလားရှိပါတယ်။ Oh, ဒူဘိုင်း၌သင်တို့၏အသက်တာကိုသုံးဖြုန်းဖို့အဘယ်အရာကိုတစ်ဦးတင့်တယ်သောအရပ်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ကျွန်တော်တစ်ဦးပွဲဒီဇိုင်နာသို့မဟုတ်မန်နေဂျာအဖြစ်ရှိတစ်ဦးကယောဘကိုရှာဖွေနိုင်ဆန္ဒရှိ.
ဒါကြောင့်သူကပြောပါတယ်ခဲ့ရဲ့သော်လည်းဒူဘိုင်း, စီးပွားရေး၏မြို့တမြို့ဖြစ်ပါသည် သင်ဒီမှာဒူဘိုင်းနှင့်အလုပ်ဆင်းပျံသန်းလာသောအခါ။ သင်တို့သည်ဤမျှအပေါ်ပညာတတ်, လူတွေအလွန်ဧညျ့ဖြစ်ကြသည်အထီးကျန်ခံစားရနှင့်ဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။ အလုပ်အကိုင်အမဲလိုက်အတူစတင်နိုင်ရန်အနည်းငယ် hectic ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကြောင့်ဒီနေ့ဈေးကွက်အတွက်ယှဉ်ပြိုင်မှု၏။ ထိုအမြော်အမြင်ရှိရှိအနေအထားကိုရွေးချယ်ဖို့ကလူကိုဦးဆောင်ခြင်းနှင့်ကောင်းမွန်စွာအတွေ့အကြုံရှိနေသောကြောင့်လူကပို preference ကိုပေးတော်မူလတံ့ ပိုကောင်းတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်.
နှင့်သော်လည်း ပိုလတ်ဆတ်ခဲဧည့်ခံပါလိမ့်မည်သငျသညျလျှင်တစ်ဦးထက်ပိုလတ်ဆတ်, ကောင်းစွာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကွိုတငျပွငျဆငျအချို့သောကုမ္ပဏီများသည်မဟုတ်ဘဲနှစ်လယ်ပိုင်းတွင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ငှားရမ်းအတွက်ကြီးမားကျယ်ပြငွေပမာဏကိုချပြီးထက်တစ်စိမ်း-sum ငွေပမာဏကိုပူဇော်နိုင်အောင်ကအနည်းဆုံးအဆင်သင့်အလုပ်မလုပ်ခြင်း, ဒါ သငျသညျဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အဘို့လိုက်ရှာတဲ့အခါမှာ စစ်မှန်သောဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏သေချာပါစေ။ တချို့ကအတုအယောင်က်ဘ်ဆိုက်များကိုသူတို့အတောင်အောက်၌ထောင်ချောက်သင်သည်ငှါတို့သည်ငွေကိုတောင်းသော်လည်း အဘယ်သူမျှမကုမ္ပဏီများမှစုဆောင်းမှုမဆိုမျိုးများအတွက်ပိုက်ဆံတောင်းလိမ့်မယ်။
အားလုံးအထက်, ငါကမင့်ပြောပါလိမ့်မယ် လိုချင်သောအလုပ်နှင့်အတူဆင်းသက်ရန်လွယ်ကူ, အစားသင်ကြိုက်တတ်တဲ့ကိုမဆိုစက်မှုလုပ်ငန်း entry-level အနေအထားအထိယူပါ။ ထိုအခါသင်သည်ထိုသူတို့နှင့်သင်၏ပထမဆုံးစာချုပ်အပြီးသတ်ပြီးနောက် ယူအေအီး၌အခြားသောအနေအထားလျှောက်ထားရန်ကြိုးစား။ သငျသညျဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့အတှေ့အကွုံနမူနာငွေပမာဏရှိပြီးနောက်တဖန်သင်တို့ကျိန်းသေနှစ်သက်တဲ့အနေအထားအရပါလိမ့်မယ်။
ဒူဘိုင်း, အကြှနျုပျ၏မကျြစိကို '' မိန်းကလေးတစ်ဦးကိုသင်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း Dream, Unique, Beautiful,
Aဝင်္နှင့် Inspiring ။
ဒူဘိုင်းအရှိဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာယနေ့ခေတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမြို့ကြီးများ။ ဒါဟာပေါင်းစပ်ဖြစ်ပါသည် အိန္ဒိယ နှင့်ပါကစ္စတန်, ထိုမှတပါး, အီရန်နိုင်ငံသားများနှင့် အဘိဓါန် Filipino ပြည်တော်ပြန်။ အဆိုပါမြို့နီးပါးမည်သည့်လူဦးရေများအတွက်ခေတ်သစ်အနာဂတ်နှင့်ဆန်းသစ်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ကွဲပြားခြားနားနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ဤမျှလောက်များစွာသောအရပ်တို့ကိုရှိပါတယ် ရှာဖွေစူးစမ်းနှင့်ပျော်စရာအဘို့မွို့၌။ ဒီနေ့စားသောက်ဆိုင်နှင့်အရက်ဆိုင်ရှာဖွေတွေ့ရှိပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဦးကအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဧရိယာဒူဘိုင်းရှိ Marina, အဆင်းလှသောဟိုတယ် Burj Al Arab ၏လှပသောမြင်ကွင်းကိုနှင့်အတူကောင်းတဲ့စားသောက်ဆိုင်နှင့်အရက်ဆိုင်များအပြည့်အဝဧရိယာဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအာရဗီထူးခြားဆန်းပြားပတ်ဝန်းကျင်ခံစားရနိုင်ပါတယ် ကွဲပြားခြားနားသောအရသာနှင့်အတူဒေသခံဆေးလိပ်သောက် device ကို -a ရှူရှိခြင်းစဉ်ပုံမှန် Arabic အဘိဓါန်မုန့်ညက်ကြိုးစားနေ။ Barista သင်ခံစားနိုငျဘယ်မှာကောင်းတဲ့အရက်ဆိုင်များနှင့်ကော်ဖီဆိုင်နှင့်ပြည့်ဝ၏ရှိရာဒုတိယနေရာဖြစ်ပါသည် ဤမျှလောက်များစွာသောလူတို့နှင့်အတူရောစပ် ကမ္ဘာတဝှမ်းနှင့်တစ်ဦးအလွန်ကြီးစွာသောအချိန်ရှိခြင်း။
အဆိုပါတတိယနေရာကလပ်ဖြစ်ပါသည် Burj Khalifa အတွက် Armani။ အကောင်းဆုံးပတ်ဝန်းကျင်, ကောင်းသောဂီတနှင့်အရသာရှိတဲ့ကော့တေးနှင့်အတူ Fancy ကလပ်။ ထိုအရဲ့ကန္တာရမေ့လျော့တော်မကြကုန်အံ့။ သင်မှဖြစ်မလာကြပါလျှင် သဲကန္တာရပြီးနောက်သင်ဒူဘိုင်းမှဖူးကြပြီမဟုတ်။ တစ်ကန္တာရ Safari ဥယျာဉ်ကိုလည်းအပေါ် Going အကြီးမြတ်ဆုံးအတှေ့အကွုံတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါသဲပေါ်မှာယုန်ကလေးကားတစ်စီးနှင့်အတူခုန်နေတဲ့ကုလားအုပ်စီးထားတဲ့အာရပ်ကခုန်ကြည့်နေစဉ်ညစာရှိခြင်းတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ဒူဘိုင်းလာရောက်လည်ပတ်သည့်အခါတစ်ဦးမဖြစ်မနေ-do ဖြစ်သောမမေ့နိုင်သောအတွေ့အကြုံကို။
သို့သော်ဤအကြောင်းကိုငါရှိရာနောက်ဆောင်းပါးမှာဖော်ပြပါလိမ့်မယ် ကျနော်တို့ကသဲကန္တာရနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ရဲ့ဒူဘိုင်းအတွက်စျေးဝယ်လိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒါကမြို့စူးစမ်းဖို့ဤမျှလောက်များစွာသောအံ့သြစရာနေရာများနှင့်ဖြစ်ရပ်များပုန်းအောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒူဘိုင်းကမ္ဘာပေါ်မှာအများဆုံးစိတ်ဝင်စားဖို့နှင့်တက်ကြွမြို့ကြီးများ၏တဦးတည်းဖြစ်၏။
ကလူသနျးပေါငျးအလုပ်အကိုင်များသို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ဒူဘိုင်းဆင်းပျံသန်းနှင့်၎င်းတို့၏ဒုတိယနေအိမ်ဖြစ်လာသဘာဝကျကျအထီးကျန်ခံစားရဘယ်တော့မှပြောသည်ခဲ့ရဲ့သော်လည်းဒူဘိုင်း, စီးပွားရေး၏မြို့အဖြစ်လူသိများသည်။ ပြည်သူ့အလွန်, ဧညျ့ပညာတတ်ဖြစ်ကြပြီးဒူဘိုင်းအတွက်ရှာဤမျှလောက်ရှိပါတယ်.
ဒူဘိုင်းကအကြီးအကျယ်အသွင်ပြောင်းထားပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာ, နေ့စဉျကြီးထွားလာသည် ကုန်စည်ပြပွဲ 2020 ရှေ့ဆက် 190 နိုင်ငံများထက် ပို. လာမည့်အောက်တိုဘာလ 2020 နေဖြင့်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြလိမ့်မည်သော်လည်းသည်။ ဒူဘိုင်းတစ်ဦးက Metro built ပွီးပိုပြီးပိုမိုလွယ်ကူတွေအများကြီးခရီးသွားလာစေသည်, လမ်းများပေါ်တွင်လေးလံသောအသွားအလာပျင်းဖို့ဦးဆောင်ခြင်းနှင့်လူဦးမီထရိုများအတွက်ရွေးချယ် အစားတစ်ဦးဘတ်စ်ကားတစ်ခုသို့မဟုတ်တက္ကစီဖမ်းထက်ဒူဘိုင်း Ultra-ခေတ်သစ်ဗိသုကာနှင့်သွက်တွေကတော့မြင်ကွင်းတစ်ခုကနေရှေးခယျြဖို့စားသောက်ဆိုင်အများအပြားရှိကြောင်းထက်အခြား ဒူဘိုင်းရှိလူများကြီးတွေအချိန်အစားကောင်းကြိုက်သူများများမှာသငျသညျလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှအစားအစာအဖြစ်အများအပြားကြိုးစားကြရနိုငျသညျ။
ဒူဘိုင်းကိုလည်းကမ္ဘာ့အလုံခြုံဆုံးမြို့ကြီးများတစ်ဦးအဖြစ်လူသိများသည်, ရာဇဝတ်မှုနှုန်းနှိုင်းယှဉ်လျော့နည်းများမှာသော်လည်းနှင့်ဒူဘိုင်းသီးသန့်စူပါရှိသည်ဖို့ကမ္ဘာပေါ်မှာတစ်ခုတည်းသောမြို့ဖြစ်၏ဒူဘိုင်းရှိလူများကားများကိုခစျြ၏ဤမျှလောက်ရှိသည်ဘယ်မှာကပိုပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ဒူဘိုင်းရဲများလုပ်, အချိန်ပြန်တတ် Buggati ပါဝင်သော၎င်းတို့၏ရေတပ်, Aston မှစူပါဆက်ပြောသည်ပါပြီ မာတင်, Rolls Royce နှင့်အများကြီးပို။ ဒူဘိုင်းကိုလည်း Celebrity အချက်အချာများအတွက်လူသိများသည်, Movie, ပွဲတော်စာရေးသော်လည်း, ဆုချီးမြှင့်ပွဲအခမ်းအနားတိုင်းလေးပုံတပုံဖြစ်လာတယ်။
လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှရေချိုးခန်းကျော်သရုပ်ဆောင်များကို ဒူဘိုင်းမတ်ေတာ နှင့်၎င်းတို့၏ဒုတိယနေအိမ်အဖြစ်လိပ်စာများ, သူတို့က, စျေးဝယ်ဒီမှာလာဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့်အထူးသဖြင့် Burj Khalifa တူသောရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာနေရာများအတွက်ပရိသတ်တွေနဲ့ရုပ်ရှင်ပစ်ခတ်မှုအဘို့နှင့်အတူနှုတ်ဆက် Burj Al Arabနှင့် Jumeirah Beach, အပြင်သဘင်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာကနေကျွန်တော်တို့ Little ကဒူဘိုင်းပိုကြီးတဲ့စကေးအပေါ်မေတ္တာမသိပါတယ်, ဒီမှာကလူခွဲဝေမှုဂရုစိုက်တတ်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်နေကြသွားလာရင်းညံ့ဖျင်းရဲ့ကူညီလေ့ သူတို့ကိုဖြတ်ပြီးလာအခါတိုင်း မည်သည့်တွေလည်းရှိတတ်တယ်သူတို့ဘေးကင်းလုံခြုံများမှာသေချာစေရန်အချိန်မအတွင်းသူတို့၏ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ဒူဘိုင်းရဲ့အုပ်စိုးသောမင်းကိုနာရီရှိတ်မိုဟာမက်ဘင် Rashid အယ်လ် Maktoum နှင့်ဟောလိဝုဒ်မင်းသား Tom Cruise နဲ့ (အာရေဗျစီးပွားရေး)
ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်ရှာဖွေသူများအချို့နေရာများ၌အခမဲ့နေထိုင်ပြီးစားနိုင်ဒူဘိုင်းလူတွေကိုသူတို့ရဲ့လက်နက်တိုးချဲ့ထားပြီးသော်လည်း အလုပ်ရှာဖွေသူများကိုကူညီ အဖြစ်အများကြီးသူတို့တတျနိုငျသအဖြစ်လူတွေကစိတ်ကူးယဉ်စတင်လိမ့်မည်ဟုသူကအခမဲ့တကယ်ဖွင့်လျှင်, ငါအခမဲ့လို့ပြောသည့်အခါ, ကောင်းစွာအလုပ်ရှာဖွေသူများပြုမူဆက်ဆံသူအချို့တိကျသောအသိုင်းအဝိုင်းလူတွေရှိပါတယ်လူတိုင်းအတွက်မဟုတ်ပါဘူး, ဒီလူစုကိုလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကိုပြသ ငတ်မွတ်သောသူတို့ကိုကူညီဖို့ရန်ကြိုးစားသူကို။
သို့မဟုတ်ပင် သငျသညျဘွဲ့အာကာသအတွင်းအသက်ရှင်ရန်ရှိပါကသင်သည်များစွာသောရွေးချယ်စရာရှိ ရှုပ်ထွေးဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူစျေးပေါစျေးနှုန်းများနှင့်အတူသော်လည်းအချို့သောနေရာများတွင်မှာလည်းတည်ရှိသည်နေထိုင်ရန်အဆောင်များရှိပါတယ် အလုပ်ရှာသူများကသင်၏ဗီဇာပေါ် မူတည်. ယာယီထွက်ခွာနိုင်သငျသညျဒူဘိုင်းဆင်းပျံသန်းမီ, အထူးသူငယ်ချင်းများသို့မဟုတ်မိသားစုရှိသူတို့ကအလွယ်တကူလျှောက်ရှိရနိုင်ဘို့, သူတို့ကိုယ်သူတို့မွို့၌တပါးအမျိုးသားကိုတွေ့သူကိုလူတို့အဘို့သင့်လျော်သောသုတေသနပြုရမည်။
သင်တို့သည်လည်းဒူဘိုင်းအသွားအလာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုသတိထားရပါမည်သင်လမ်းမပေါ်တွင်အမှိုက်သရိုက်စွန့်ပစ်, စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအောက်ပါမကြီးမားကျယ်ပြဒဏ်ငွေပေးဆောင်တက်အဆုံးသတ်နိုင်လူကူးဖြတ်ကူးနေစဉ်သတိထားရ, အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်တွင်တံထွေးထွေးခြင်း, ဒုက္ခ၌သငျထဆင်းသက်နိုင်အောင်တပ်လှန့်ဖြစ်ခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်မှုများကိုရှောင်ကြဉ်နိုင်, အမြဲတမ်းဗီဇာမိတ္တူသယ်ရမယ် သငျသညျတခုစော်ဘွား ID ကိုရှိသည်သည်အထိရဲတပ်ဖွဲ့သည်သင်၏လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများမစောင့်အဘို့မိမိတို့ထိန်းသိမ်းထား၌သငျယူစေခြင်းငှါ, အတိုင်းဘေးကင်းဘက်မှာဖြစ်, အရာ သငျသညျအလုပျတဆင်းသက်ပြီးနောက်သင်ကရတဲ့လိမ့်မည်ဤအချို့မရဲ့နဲ့့ရဲ့ဖြစ်ကြသည်။
အလုပ်အကိုင်အမဲလိုက်အတူစတင်နိုင်ရန်အနည်းငယ် hectic ဖြစ်နိုင်ပါတယ်, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပညာရှိရှိအနေအထားကိုရွေးချယ်ဖို့ဒီနေ့ဈေးကွက်ဦးဆောင်သည့်ကလူအတွက်ပြိုင်ဆိုင်မှုများ, အခွက်တဆယ်ကိုစာရေးတံနှင့်အတူအမျိုးမျိုးသောနိုင်ငံတွေထဲကနေလူတွေရှိပါတယ်, ကောင်းစွာအတွေ့အကြုံရှိနေသောကျွမ်းကျင်မှုနှင့်လူတကယ်တော့ကြောင်းကိုပိုပြီး preference ကိုပေးလိမ့်မည်။
သင်တစ်ဦးထက်ပိုလတ်ဆတ်ဖြစ်, ကောင်းစွာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကွိုတငျပွငျဆငျနေလျှင်ဒီတော့ဒီတော့သော်လည်းပိုလတ်ဆတ်ခဲ, ဧည့်ခံပါလိမ့်မည် အနည်းဆုံးအဆင်သင့်အလုပ်မလုပ် အချို့သောကုမ္ပဏီများသည်မဟုတ်ဘဲနှစ်လယ်ပိုင်းတွင်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များငှားရမ်းအတွက်ကြီးမားကျယ်ပြငွေပမာဏကိုချပြီးထက်တစ်စိမ်း-sum ငွေပမာဏကိုပူဇော်နိုင်ပြီး, တချို့ရှာဖွေစုဆောင်းလည်းဆင်းကိုခြေရာခံနိုင်အောင် ကူဝိတ်အတွက်အလုပ်ရှာဖွေသူများ.
အထူးသထက်ပိုလတ်ဆတ်, ဆိတ်ကွယ်ရာကိုသင်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အဘို့လိုက်ရှာသောအခါထံမှ သူတို့ရဲ့အတောင်အောက်၌ထောင်ချောက်သငျသညျ, အခြို့အတုအယောင်ဝက်ဘ်ဆိုက်များစစ်မှန်သောဝက်ဘ်ဆိုက်များ၏သေချာစေခြင်းငှါ, ဖြစ်နှင့်မျှမတို့ကုမ္ပဏီများအတွက်ပိုက်ဆံတောင်းမယ်လို့သော်လည်း, ပိုက်ဆံတောင်း စုဆောင်းမှုမဆိုမျိုး သငျသညျဤအခြေအနေတကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာတွေ့ပါလျှင်တပ်လှန့်ခြင်းရှိလော့။
ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်မှုများကိုရှောင်ကြဉ်ရန်သင်သေချာအောင်ရန်ရှိသည် Google သူတို့ရဲ့ရုံးများနှင့်သင်စိတ်ချစွာကြွင်းသောအရာဖြစ်ကြောင်းနှင့်သင်တို့သည်လည်းသော်လည်းအချို့အလုပ်အေးဂျင့်ကိုတွေ့လိမ့်မည်ဒါကြောင့်အွန်လိုင်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုဖတ်ရှု သူတို့ကအရည်အချင်းပြည့်မီသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက်အင်တာဗျူးစီစဉ် သင့်ရဲ့နောက်ခံနှင့်ဆက်စပ်သောအလုပ်အကိုင်အခွင့်အနှုန်းအဖြစ်နှင့်သူတို့မှာလည်းကုမ္ပဏီ၏နှင့်အတူလည်စည်း-ups ရှိသကဲ့သို့သငျ, ထိုရိုးသားဖို့ကောင်းသောအရာတစ်ခုခုသည်တစ်ဦးကမ်းလှမ်းမှုစာတစ်စောင်လက်မှတ်ထိုးတဲ့အခါမှသာသင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးလစာအချို့ရာခိုင်နှုန်းတောင်းခံ သူတို့သည်သင်၏အလုပ်တွေအများကြီးကိုပိုမိုလွယ်ကူစေရန်လုပ်သူတို့စစ်မှန်သောလူမျိုးဖြစ်ကြ၏ဒီတော့သူတို့အဖြစ်ကဒီမှာလိမ်လည်မှုနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်ကြဘူး ဤနေရာတွင်ပိုလတ်ဆတ်ကူညီရန်.
ဒူဘိုင်းတွင်သာ legit အလုပ်က်ဘ်ဆိုက်များကိုသုံးပါ!
သင်တို့သည်လည်းယူအေအီးအတွက် CV ကိုဖြန့်ဖြူးန်ဆောင်မှုများကိုဖြတ်ပြီးလာကြလိမ့်မည်, ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဖြစ်သောကြောင့်တဘို့ရွေးချယ်ဖို့မအကြံပြု သူတို့ပဲသင်၏ CV ဖြန့်ဝေ သူတို့ရဲ့တွင်တွေ့ပါလိမ့်မည်သည့်ကျပန်းကုမ္ပဏီ၏အထွေထွေမန်နေဂျာကအီးမေးလ်အိုင်ဒီမှ ဝက်ဘ်ဆိုက်များသို့မဟုတ် LinkedIn တို့အကောင့်သင်တို့သည်လည်းမိမိတို့၏အောက်ပါကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာကအီးမေးလ်အိုင်ဒီကိုရှာတွေ့ခြင်းဖြင့်ထိုကဲ့သို့သောအမှုအရာလုပျနိုငျသညျ။
ယနေ့ခေတ်ယူအေအီးအတွက်အတုတွင်ကျယ်စွာ Creating အပြစ်မဲ့လူတွေကိုမှတဆင့်ဝင်ငွေထုတ်လုပ်တစ်ဦးအရာဖြစ်လာကြပါပြီ, ကွဲပြားခြားနားသောမြို့များမှလာသောသူတို့အားကလူ ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အလိမ်လည်မှုမှကြီးမားကျယ်ပြငွေပမာဏကိုပေးဆောင်တစ်ချိန်ကပင်စဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲ, လွယ်ကူစွာသူတို့ရဲ့ထောင်ချောက်ထဲမှာလဲကျ ပြန်လာအတွက်အလုပ်အကိုင်အမျှော်လင့်ငယ်သူတို့ဒူဘိုင်းကအမြဲသူများကလူကိုခြေရာခံများနှင့်ဒူဘိုင်းတွင်လိမ်လည်လုပ်ဆောင်မှုများထဲကနေလူတွေကယ်ဖို့ယူအေအီးကိုဖြတ်ပြီးတစ်တပ်လှန့်မက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့ဒီ fraudsters အကြောင်းကိုသိကြပါဘူး။
ငါပြောချင်သမျှထက် ကလိုချင်သောအလုပ်နှင့်အတူဆင်းသက်ရန်လွယ်ကူမယ့်သူတို့ကိုသင်နှင့်သင်၏ပထမဆုံးစာချုပ်အပြီးသတ်ပြီးနောက်မဟုတ်ဘဲ, သင်ကြိုက်တတ်တဲ့ကိုမဆိုစက်မှုလုပ်ငန်း entry-level အနေအထားတက်ယူ အခြားအနေအထားလျှောက်ထားရန်ကြိုးစားနှင့်သင့်သုတေသနလုပ်ငန်းစတင်ရန် သငျသညျကျိန်းသေနှစ်သက်တဲ့အနေအထားရလိမ့်မယ်, အတွေ့အကြုံသင်သည်များစွာသောအမှုအရာသှနျသငျ, ကသင့်ရဲ့အလုပ်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ပိုပြီးဖွံ့ဖြိုးဆဲကြလိမ့်မည်, သင့်ယုံကြည်မှုမြှင့်တင်ရန်ပါလိမ့်မယ်။ အလားတူပဲသူတို့ထံမှအကူအညီကိုရှာ, အခြားသူများကိုကူညီတဲ့ကွန်ယက်ကိုဖြစ်စေလျက်, နေ့တိုင်းလူသစ်ဖြည့်ဆည်း သငျတို့သကျိန်းသေ, ဒူဘိုင်းအတွက်ယူအေအီးအလုပ်တစ်ခုဆင်းသက်ပါလိမ့်မယ်.
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်၏ပရိုဖိုင်နှင့်အတူလိုက်ဖက်မဆိုအလုပ်ရှိလြှငျ, ASAP အဆိုပါ HR မန်နေဂျာ hit ဖို့ကြိုးစားကျေးဇူးပြုပြီး။ သငျသညျရောင်းအား & စျေးကွက်ရှာဖွေရေး / ဖောက်သည်စောင့်ရှောက်မှုဝန်ဆောင်မှု / လက်လီ၌သင်တို့၏န်ဆောင်မှုများပေးရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အဒါမှမဟုတ်သင်မှပေးအပ်အလုပ်သင့်လျော်ဘာမှ။
အဆိုပါအများစုဟာ ပြည်ပရှိရဲ့အိပ်မက် GCC နိုင်ငံများအတွက်အလုပ်လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် သူတို့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းများဖွင့်မြှင့်တင်ရန်။ သင်ဘယ်နေရာအလုပ်လုပ်ရောင်ခြည်ဆန္ဒရှိသင့် ဒူဘိုင်း / ကာတာနိုင်ငံ / အိုမန် / အဘူဒါဘီ / ဘာရိန်း / ကူဝိတ်နဲ့တူပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံတွေနေရာ စသည်တို့ကို
နေသမျှကာလပတ်လုံးသူတို့သည်သင့်ပင်လယ်ကွေ့ဒေသတွင်အလုပ်ပူဇော်အဖြစ်။ ဒီတော့လျှင်မည်သည့်ရလဒ်မရှိဘဲနောက်ဆုံး4/5နှစ်ပေါင်းအွန်လိုင်းတွင်ကျယ်စွာအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်လျှောက်ထားခဲ့ကြသည်။ နည်းနည်းခက်ခဲ hit ဖို့ကြိုးစားပါ။ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Upload လုပ်ပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့နှင့် "Dubaicitycompany" မှအပြုသဘောတုန့်ပြန်ရတဲ့မျှော်လင့်ဖို့စတင်ပါ။
နှစ်တွေကြောင့်ငါ့အရိုးထဲသို့ဆင်း trickled ။
ဒါဟာဒဏ်ငွေအမျိုးသမီးတစ်ဦးသို့ blossoming လူငယ်တစ်ဦးအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုကြည့်ကဲ့သို့ဖြစ်၏
ငယ်ရွယ် & ဟောင်းက Black & လူဖြူ, ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုဒဏ်ငွေစောင့်ကြည့်လျှက်ရှိကြောင်းခဲ့သည် အမျိုးသမီးတစ်ဦးကြီးထွား.
- တစ်ဦးကလတ်ဆတ်တဲ့ဘွဲ့ရ? သင်တစ်ဦးမြင့်တက်ကြယ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
- အနေတော်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း? သင့်မိသားစုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပွားယဉ်ကျေးမှု၌ဘေးကင်းလုံခြုံဖြစ်လိမ့်မည်။
- အကြီးတန်း? အသီးအနှံကိုရိတ်ရရန်အချိန် ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ဦးဘဝကိုအချိန်၏အကျိုးကျေးဇူးများ.
ဒီနေ့သင်ဘယ်မှာနေပါစေ, ငါတို့သည်သင်တို့ဒူဘိုင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုလာရောက်ပူးပေါင်းကြသဖြင့်ယနေ့ခြားနားချက်စေနိုင်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ သဲကန္တာရကောင်းကင်ပြာနှင့်တွေ့ဆုံနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု services- သင်၏နောက်နေအိမ်, သင့်ကြီးမားသောအပြောင်းအရွေ့ဖြစ်ပါသည်ပို့ဆောင်ရှိရာကျွန်ုပ်တို့၏လှပသော City- ။
လာကြကာစစ်မှန်စီးတီး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ် အားလုံးအလုပ်ကြိုးစားတဲ့အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်လျောက်ပတ်သောအသက်တာ၏အစိုင်အခဲအခြေခံအုတ်မြစ်တက်အောင်မိသားစုနွေးထွေးမှု, ပျော်ရွှင်မှု, အခက်အခဲတွေ, ခံနိုင်ရည်နှင့် citizen- အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအတှေ့အကွုံအနှစ်တဆင့်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
သင်တို့ကဲ့သို့ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ် အန်တိုနီ Raj Jayamani LinkedIn ကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်လိုက် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုဆီသို့လာရန်။ ဒူဘိုင်းမြို့ Company ၏စည်းကမ်းချက်များ၌သင်၏အမျှော်လင့်ထားနှင့်တွေ့ဆုံ အလုပ်လုပ်နှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းတွင်နေထိုင်သောများအတွက်လမ်းညွှန်ပေး။
တူသော LinkedIn အပေါ်ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီ Follow:
အန်တိုနီ Raj Jayamani LinkedIn ကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်လိုက်!
ယခု DCC ကုမ္ပဏီ ကျွမ်းကျင်သူများအတှကျအခကျြပေး။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘို့အသီးအသီးဘာသာစကားကိုသတင်းအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ဒူဘိုင်းလမ်းညွှန်များအတွက်ဂျော့ဘ်။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူယခုသင်ကသင်၏ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့်အတူညီညွတ်သောအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်လမ်းပြသောအကြံပေးချက်များနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်ရရှိနိုင်သည်။